ဘာကြောင့် Website တစ်ခုရှိထားဖို့လိုအပ်တာလဲ? - Zeagwat, Inc.
ဘာကြောင့် Website တစ်ခုရှိထားဖို့လိုအပ်တာလဲ?
ကျွန်တော်တို့ သိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ အင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာ မိမိကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအတွက် Website စာမျက်နှာတစ်ခု ရှိမထားဘူးဆိုရင် လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းတွေ များစွာထိခိုက်စေနိုင်တာကတော့ မလွဲမသွေဖြစ်လာပါပြီ။
ဟုတ်ပြီ Facebook Page တစ်ခုရှိတယ်….. မလုံလောက်ဘူးလား? ဘာလို့ ပိုက်ဆံအကုန်ကျခံပြီး Website လုပ်နေတော့မှာလဲ? ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ဇီးကွက်ကို မကြာခဏမေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အင်တာနက်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိလုပ်ငန်းကို ပိုမိုတိုးတက်စေချင်တယ်ဆိုရင် Website တစ်ခုကို လုပ်ငန်းရှင်တိုင်း မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ ဘာလို့ လိုအပ်ရသလဲဆိုတော့
1. Brand Impression ကိုများစွာတိုးတက်စေပါတယ်
ဆိုလိုတာကတော့ မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုကို ဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိလုပ်ငန်းဟာ အင်တာနက်ပေါ်မှာ Website တစ်ခုရှိထားတယ်ဆိုတဲ့ Impression ဟာမိမိရဲ့ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာ များစွာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြီးမားပြီး ၀န်ထမ်းပေါင်းမြောက်များစွာဖြင့် လည်ပတ်လျက်ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီတိုင်းမှာ Website တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိမိကုမ္ပဏီရဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပုံတွေ၊ ၀န်ဆောင်မှုတွေ၊ ထုတ်ကုန်တွေကို Website ပေါ်မှာအလွယ်တကူ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
2. သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အချိန်မရွေးနေရာမရွေး စိတ်၀င်စားတဲ့ Customer ဆီကိုအချက်အလက်တွေ ၂၄နာရီ အထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်
Reachable ဆိုတာတော့ မိမိလုပ်ငန်းနာမည်ကို လူသိနိုင်စွမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းကြော်ညာဖို့အတွက် Billboard ထောင်မယ်ဆိုရင် Billboard နားကိုဖြတ်သွားပြီး ကြည့်တဲ့ လူဦးရေတချို့ပဲသိပါမယ်။ Flyer ၀ေမယ်ဆိုရင် ထုတ်ထားတဲ့အရေအတွက် လောက်ပဲသိပါမယ်။ ဒါပေမယ့် Website တစ်ခုရှိထားရင်တော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ လူကြိုက်သလောက်ကို ၂၄ နာရီ ပိတ်ရက်မရှိ အချိန်မရွေး မိမိလုပ်ငန်းအကြောင်းတွေ၊ ၀န်ဆောင်မှုတွေ၊ ထုတ်ကုန်တွေကိုသိရှိနိုင်မှာပါ။
3. သင့်အတွက် စိတ်၀င်စားတဲ့ Customer အသစ်တွေ ရမယ့်အခွင့်အရေးတွေများစွာဆုံးရှုံးနိုင်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဦးရေ 2.4 Billion ကျော်ဟာအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲက ၉၀ရာခိုင်နှုန်းဟ ၁၂လအတွင်းမှာ Website တစ်ခုခုကနေ ပစ္စည်း၀ယ်တာ (သို့မဟုတ်) ကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်တာမျိုးတွေကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်။ သင့်မှာ Website တစ်ခုမရှိဘူးဆိုရင် သင်ဟာဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးကြီးကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခံချင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
4. သင့်စိတ်ကူးထားသလိုမျိုး စိတ်ကြိုက် Website တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီး ၀န်ဆောင်မှုများ၊ ထုတ်ကုန်များကို ခင်းကျင်းပြသနိုင်
Facebook, Twitter, Instagram အစရှိတဲ့ Social Network တွေမှာ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ၊ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို အချိန်မရွေးကြည့်ရှုလို့လွယ်အောင် ပြုလုပ်ထားပါသလား? ဒါမှမဟုတ် သင်ကိုယ်တိုင် အသွင်အပြင်တွေကို စိတ်ကြိုက်စီမံလို့ရပါသလား? သင်ဟာ Online Shopping လုပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သင့်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အမျိုးအမည်အလိုက် ခွဲခြားပြီး အလွယ်တကူ ရှာလို့ရအောင် ပြုလုပ်ထားပါသလား? အဖြေကတော့ မရပါဘူး… ဒီလိုနေရာမှာ Website တစ်ခုရှိထားခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို ခင်းကျင်းပြသဖို့အတွက် သင်ကြိုက်နှစ်သက်သလို စီမံဆောင်ရွက်ပြီးခင်းကျင်းပြသနိုင်ပါတယ်။ “Your imagination is your limitation” ပါ.. သင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို Website တစ်ခုမှာကန့်သတ်မထားပါဘူး။
5. သင်ပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်သူမှ သင့်လုပ်ငန်းကို Facebook Page တွေလို Report ထုပြီး နှောင့်ယှက်ဖျက်စီးလို့မရပါဘူး
သင်ဟာ Facebook Page တစ်ခုကို မီခိုပြီး သင့်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ကိုယ်တိုင်ဟာ သင့်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှမရှိတဲ့ Online ပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Facebook Page တွေအဖျက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေသင်ကြားဖူးမှာပါ။ မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ Page ဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် အဖျက်ခံရပြီဆိုရင် သင်တည်ဆောက်ထားသမျှအချက်အလက်တွေအကုန်လုံး၊ Customer တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေအကုန်လုံးဟာ သဲထဲရေသွန်လိုက်သလို အကုန်ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Website တစ်ခုနှင့် သင့် Customer တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို အစရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို အနှောက်အယှက်ကင်းစွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ Facebook Page ဆိုတာ သင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အရာမဟုတ်ပါဘူး Website တစ်ခုဆိုတာကတော့ သင်ကိုယ်တိုင် ငွေအကုန်ကျခံကာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အရာဖြစ်တဲ့ အတွက် သင်လုံး၀ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Webpage တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါဖော်ပြခဲ့သည့် အကြောင်းရာအချို့သည် Website တစ်ခုလိုအပ်ရခြင်းရဲ့ များစွာသော အကြောင်းအရင်းများထဲမှ တချို့ကို ထုတ်နှုတ်ပြသထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကဲ မိတ်ဆွေတို့လဲ ဘာကြောင့်လိုအပ်သလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်း တချို့ကို အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် အများသူငှာ ဗဟုသုတရရှိစေဖို့ Comment လေးရေး မျှ၀ေပေးခဲ့ပါဦး….